येशूको पुनर्जीवन—यसले हामीलाई कस्तो असर पार्छ? | अध्ययन
“उहाँ ब्यूँतिसक्नुभयो।”—मत्ती २८:६.
येशूको पुनर्जीवन कसरी अरूको भन्दा फरक थियो?
येशू पुनर्जीवित हुनुभयो र उहाँ अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ भन्न सक्ने आधारहरू के-के हुन्‌?
येशूको पुनर्जीवनले तपाईंलाई कस्तो असर गरेको छ?
१, २. (क) धर्मगुरुहरू कुन कुरा बुझ्न चाहन्थे? पत्रुसले कस्तो जवाफ दिए? (शीर्षकमाथिको चित्र हेर्नुहोस्) (ख) पत्रुस साहसी हुन सक्नुको कारण के थियो?
येशूको मृत्यु भएको केही हप्तापछि यहूदी धर्मगुरुहरूको एउटा समूहले पत्रुसलाई केरकार गऱ्यो। येशूलाई मार्ने षड्यन्त्र रचेका मानिसहरू तिनीहरू नै हुन्‌। पत्रुसले एक जना अपाङ्गलाई निको पारेको देखेर ती धर्मगुरुहरू रिसले चूर भए। तिनीहरूले पत्रुसलाई यस्तो प्रश्न गरे, “तिमीहरूले कसको अख्तियार पाएर वा कसको नाममा यो काम गऱ्यौ?” पत्रुसले साहसी हुँदै यसो भने, “नासरी येशू ख्रीष्ट, जसलाई तपाईंहरूले खम्बामा टाँग्नुभयो तर परमेश्वरले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो, हो, उहाँको नाममा यो मानिस सद्दे भएर तपाईंहरूसामु खडा भएको हो।”—प्रेषि. ४:५-१०.
२ यसअघि पत्रुसले डरको कारण येशूलाई तीन पटकसम्म तिरस्कार गरेका थिए। (मर्कू. १४:६६-७२) तर अहिले भने पत्रुस धर्मगुरुहरूसामु साहसी भएर उभिरहेका छन्‌। उनी साहसी हुन सक्नुको कारण के थियो? उनले पवित्र शक्ति पाएका थिए र येशू ब्यूँतनुभयो भन्ने कुरामा उनी पक्का थिए। पत्रुस किन पक्का थिए? हामी पनि कसरी पक्का हुन सक्छौं?
३, ४. (क) येशूका चेलाहरू जन्मनुअघि नै को-को पुनर्जीवित भएका थिए? (ख) येशूले क-कसलाई पुनर्जीवित पार्नुभयो?
३ मरेका मानिसहरू फेरि जीवित हुन सक्छन्‌ भनेर येशूका चेलाहरूलाई थाह थियो। उनीहरू जन्मनुअघि पनि केही मानिसहरू पुनर्जीवित भएका थिए। भविष्यवक्ता एलिया र एलीशालाई परमेश्वरले पुनर्जीवित पार्ने शक्ति दिनुभएको थियो र यो कुरा येशूका चेलाहरूलाई थाह थियो। (१ राजा १७:१७-२४; २ राजा ४:३२-३७) एलीशाको चिहानमा फ्याँकिएको एउटा लासले एलीशाको हड्डीहरू छुनेबित्तिकै त्यो मानिस जीवित भएको थियो। (२ राजा १३:२०, २१) हामीले परमेश्वरको वचन सत्य हो भनेर विश्वास गरेजस्तै येशूका चेलाहरूले पनि पुनर्जीवनका ती विवरणहरूमा विश्वास गर्थे।
४ येशूले मरेकाहरूलाई ब्यूँताउनुभएको विवरणहरू पढ्दा अहिले पनि हाम्रो मन छुन्छ। जस्तै, उहाँले एक जना विधवाको छोरालाई मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो। त्यतिबेला ती विधवा कत्ति खुसी भइन्‌ होला, सोच्नुहोस् त! (लूका ७:११-१५) अर्को पटक येशूले १२ वर्षकी केटीलाई जीवित पार्नुभयो। छोरी जीवित भएको देख्दा शोकमा डुबेका तिनका आमाबुबा पक्कै पनि हर्षित भए। (लूका ८:४९-५६) लाजरस चिहानबाट निस्केर आएको देख्दा मानिसहरूले कत्ति अचम्म माने होलान्‌, कल्पना गर्नुहोस्!—यूह. ११:३८-४४.
येशूको पुनर्जीवन फरक थियो
५. येशूको पुनर्जीवन कसरी अरूको भन्दा फरक थियो?
५ हुन त येशूबाहेक अरू पनि पुनर्जीवित भएका थिए तर येशूको पुनर्जीवन उनीहरूको भन्दा फरक थियो। ती मानिसहरू रगत र मासुको शरीरमा ब्यूँतिए तर येशू भने अदृश्य शरीरमा ब्यूँतनुभयो। ती मानिसहरू पछि फेरि मरे तर येशू भने सधैंको लागि जीवित हुनुभयो। (प्रेषित १३:३४ पढ्नुहोस्) येशू “मानिसको रूपमा मर्नुभयो तर अदृश्य व्यक्तिको रूपमा ब्यूँताइनुभयो” भनेर पत्रुसले लेखे। साथै, “उहाँ परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ अनि स्वर्गदूतहरू, अख्तियारहरू अनि शक्तिहरू उहाँकै अधीनमा राखिएका छन्‌।” (१ पत्रु. ३:१८-२२) हुन त अरू मानिसहरूको पुनर्जीवन पनि सामान्य थिएन। तर येशूको पुनर्जीवन सबैभन्दा ठूलो चमत्कार थियो।
६. येशू जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाह पाउँदा चेलाहरूमा कस्तो असर पऱ्यो?
६ येशूको पुनर्जीवनले उहाँका चेलाहरूमा गहिरो असर पाऱ्यो। उहाँका शत्रुहरूले सोचेजस्तो उहाँ सधैंको लागि मर्नुभएन। उहाँ अदृश्य शरीरमा ब्यूँतनुभयो र उहाँलाई कुनै मानिसले पनि हानि गर्न सक्ने थिएनन्‌। येशू पुनर्जीवित हुनुभएकोले उहाँ परमेश्वरको छोरा हो भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाह पाउँदा चेलाहरू औधी खुसी भए; तिनीहरू निडर र साहसी हुन सके। येशू फेरि जीवित नभएको भए यहोवाको उद्देश्य पूरा हुने थिएन र ती चेलाहरूले सुनाएको सन्देश गलत हुने थियो।
७. आज येशू के गर्दै हुनुहुन्छ? कस्ता प्रश्नहरू उठ्छन्‌?
७ थुप्रै मानिसले येशूलाई कुनै समय नाम चलेको व्यक्तिको रूपमा मात्र हेर्छन्‌ तर अहिले पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुराचाहिं उनीहरूलाई थाह छैन। अहिले उहाँ विश्वभर भइरहेको प्रचारकार्यको रेखदेख गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको राज्यको राजा हुनुहुन्छ। उहाँले अब छिट्टै संसारबाट दुष्टहरूलाई हटाउनुहुनेछ र पृथ्वीलाई सुन्दर बगैंचामा परिणत गर्नुहुनेछ। त्यतिबेला मानिसहरू सधैंभरि बाँच्नेछन्‌। (लूका २३:४३) येशू पुनर्जीवित नभएको भए यी कुराहरू पूरा हुने थिएन। त्यसोभए येशू पुनर्जीवित हुनुभएको थियो भनेर हामी किन विश्वास गर्न सक्छौं? उहाँको पुनर्जीवनले हामीलाई कस्तो असर पार्छ?
यहोवाले येशूलाई पुनर्जीवित पार्नुभयो
८, ९. (क) धर्मगुरुहरूले येशूको चिहानमा किन पहरा दिन लगाए? (ख) स्त्रीहरू चिहानमा जाँदा के भयो?
८ येशूको मृत्युपछि यहूदी धर्मगुरुहरू पिलातसकहाँ गए र यसो भने, “हजुर, त्यस ठगाहाले आफू जिउँदो छँदा ‘तीन दिनपछि म ब्यूँतनेछु’ भनेको हामीलाई याद छ। त्यसैले तेस्रो दिनसम्म त्यसको चिहानमा पहरा दिने हुकुम गर्नुहोस्। नत्र त, त्यसका चेलाहरू गएर त्यसको लास चोरेर लैजालान्‌ र ‘उहाँ मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो’ भनेर मानिसहरूलाई भन्लान्‌। त्यसो भयो भने, त्यसको पछिल्लो ठगीले पुऱ्याउने नोक्सानी पहिलोको भन्दा चर्को हुनेछ।” पिलातसले यस्तो आदेश दिए, “तिमीहरू सिपाहीहरू लिएर जाओ र त्यसको सक्दो सुरक्षा गर।” तिनीहरूले त्यसै गरे।—मत्ती २७:६२-६६.
९ येशूको लास चट्टान खोपेर बनाइएको चिहानमा राखिएको थियो। चिहानको ढोका ठूलो ढुङ्गाले बन्द गरिएको थियो। यहूदी धर्मगुरुहरू येशू चिहानमै सडेको चाहन्थे। तर यहोवाको सोचाइ भने बिलकुलै फरक थियो। मरियम मग्दलिनी र अर्की मरियम येशूको मृत्युको तेस्रो दिन चिहानमा गए। तिनीहरूले चिहानको मुखमा राखिएको ढुङ्गो गुडाइएको र त्यसमाथि स्वर्गदूत बसिरहेको देखे। स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई येशूको लास राखिएको ठाउँ हेर्न लगाए तर उहाँको लास त्यहाँ थिएन। स्वर्गदूतले यसो भने, “उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, किनकि . . . उहाँ ब्यूँतिसक्नुभयो।” (मत्ती २८:१-६) हो, यहोवाले येशूलाई ब्यूँताउनुभयो।
१०. पावलले येशू पुनर्जीवित हुनुभएको प्रमाण कसरी दिए?
१० त्यसपछिको ४० दिनभित्र भएका घटनाहरूबाट येशू पुनर्जीवित हुनुभएको कुरा अझ स्पष्ट भयो। प्रेषित पावलले कोरिन्थीहरूलाई यस्तो लेखे, “मैले पाएका कुराहरू मैले तिमीहरूलाई सुम्पिदिएँ र तीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यही हो कि धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिमै ख्रीष्ट हाम्रा पापहरूका लागि मर्नुभयो; अनि उहाँलाई गाडियो, हो, धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिमै उहाँ तेस्रो दिनमा ब्यूँताइनुभयो; अनि उहाँ केफास र त्यसपछि बाह्रै जनाकहाँ देखा पर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ एकैचोटि पाँच सयभन्दा धेरै भाइकहाँ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरैजसो अहिलेसम्मै छन्‌ तर कोही भने मृत्युको चिर निद्रामा परिसकेका छन्‌। यसपछि उहाँ याकूबकहाँ अनि त्यसपछि सबै प्रेषितहरूकहाँ देखा पर्नुभयो; तर सबैभन्दा अन्तमा, मानौं बेला नपुगी जन्मेको मानिसकहाँ जस्तो गरी उहाँ मकहाँ पनि देखा पर्नुभयो।”—१ कोरि. १५:३-८.
येशू पुनर्जीवित हुनुभयो भन्ने आधारहरू
११. येशू कसरी “धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिमै” पुनर्जीवित हुनुभयो?
११ पहिलो, येशू “धर्मशास्त्रमा लेखिएबमोजिमै” पुनर्जीवित हुनुभएको थियो। येशू पुनर्जीवित हुनुहुनेछ भनेर बाइबलमा पहिल्यै लेखिएको थियो। जस्तै, परमेश्वरले “आफ्नो पवित्र जनलाई” चिहानमा कुहिन दिनुहुन्न भनेर दाऊदले लेखे। (भजन १६:१० पढ्नुहोस्) ती “पवित्र जन” येशू हुनुहुन्छ भन्नेबारे इस्वी संवत्‌ ३३ पेन्तिकोसको दिनमा पत्रुसले यस्तो कुरा बताए, “[दाऊदले] ख्रीष्ट पुनर्जीवित हुने विषयमा यसो भने, ‘उहाँलाई न चिहानमा छोडिनेछ न त उहाँको शरीर नै कुहिनेछ।’”—प्रेषि. २:२३-२७, ३१.
१२. पुनर्जीवित हुनुभएका येशूलाई क-कसले देखे?
१२ दोस्रो, थुप्रैले पुनर्जीवित हुनुभएका येशूलाई देखे। पुनर्जीवित भएपछि येशू ४० दिनसम्म पृथ्वीमै हुनुहुन्थ्यो। चिहान नजिकैको बगैंचामा, इम्माउस जाने बाटोमा र अन्य ठाउँमा उहाँ चेलाहरूकहाँ देखा पर्नुभयो। (लूका २४:१३-१५) येशूले चेलाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा र समूहमा भेट्नुभयो। जस्तै, उहाँले पत्रुस र अन्य चेलाहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट्नुभयो। उहाँ एकैचोटि ५०० भन्दा धेरै चेलाकहाँ पनि देखा पर्नुभयो। थुप्रैले पुनर्जीवित हुनुभएका येशूलाई देखे। हामी यस तथ्यलाई नकार्न सक्दैनौं।
१३. येशू पुनर्जीवित हुनुभएको कुरामा चेलाहरू विश्वस्त थिए भनेर किन भन्न सक्छौं?
१३ तेस्रो, चेलाहरूले येशूको पुनर्जीवनबारे जोसका साथ प्रचार गरे। येशूको पुनर्जीवनबारे प्रचार गरेकोले चेलाहरूले सतावट र दुःख खप्नुपऱ्यो। कतिपयले त जीवनसमेत गुमाउनुपऱ्यो। यो कुरा विचार गर्नुहोस्: पत्रुसले आफ्नो जीवनै दाउमा लगाएर धर्मगुरुहरूलाई येशूको पुनर्जीवनबारे प्रचार गरे। येशू पुनर्जीवित नभएको भए के पत्रुसले त्यसो गर्थे होलान्‌ र? येशू जीवित हुनुहुन्छ र उहाँले प्रचारकार्यको रेखदेख गर्दै हुनुहुन्छ भनेर पत्रुस र अरू चेलाहरू पक्का थिए। साथै, येशू पुनर्जीवित भएको देखेर ती चेलाहरूलाई पुनर्जीवनको आशा वास्तविक लाग्यो। येशूको खातिर मर्नुपऱ्यो भने पनि आफू पुनर्जीवित हुने कुरामा तिनीहरू पक्का हुन सके। स्तिफनस पनि यो कुरामा विश्वस्त थिए। त्यसैले तिनी मर्नसमेत तयार भए।—प्रेषि. ७:५५-६०.
१४. येशू जीवित हुनुहुन्छ भनेर तपाईं किन पक्का हुनुहुन्छ?
१४ चौथो, येशू राजा र मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हामीसित छ। अहिले यहोवाका साक्षीहरूको सङ्ख्या बढ्दै छ। येशू पुनर्जीवित नभएको भए के यो सम्भव हुने थियो? साथै, येशू पुनर्जीवित नभएको भए हामीले उहाँबारे सुन्ने मौका नै पाउने थिएनौं। येशू जीवित हुनुहुन्छ र विश्वभर भइरहेको प्रचारकार्यको रेखदेख गर्दै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने ठोस आधार हामीसित छ।
येशूको पुनर्जीवनले हामीलाई कस्तो असर पार्छ?
१५. हामी किन साहसी भई प्रचार गर्छौं?
१५ येशू पुनर्जीवित हुनुभएको कुरा थाह पाएकोले हामी साहसी भई प्रचार गर्छौं। लगभग २,००० वर्षदेखि परमेश्वरका शत्रुहरूले सुसमाचार प्रचारकार्यलाई रोक्न विभिन्न किसिमका हतियार चलाइरहेका छन्‌। जस्तै: धर्मत्याग, खिसी, सामूहिक आक्रमण, प्रतिबन्ध, यातना र मृत्युदण्ड। तर हामीविरुद्ध “बनाइएको जुनसुकै हतियार”-ले पनि प्रचारकार्य र चेला बनाउने कामलाई रोक्न सकेको छैन। (यशै. ५४:१७) हामीलाई तर्साउन सैतानले जोसुकैलाई चलाए पनि हामी डराउँदैनौं। आफ्नो प्रतिज्ञाअनुसारै येशू सधैंभरि हामीसितै हुनुहुन्छ। (मत्ती २८:२०) हामी कहिल्यै डराउँदैनौं किनकि हाम्रा शत्रुहरूले जत्ति नै प्रयास गरे पनि हामीलाई चुप गराउन सक्दैनन्‌।
येशू पुनर्जीवित हुनुभएको कुरा थाह पाएकोले हामी साहसी भई प्रचार गर्छौं (अनुच्छेद १५ हेर्नुहोस्)
१६, १७. (क) येशूको पुनर्जीवनले उहाँले सिकाउनुभएको सबै कुरा सही हो भन्ने ग्यारेन्टी कसरी दिन्छ? (ख) यूहन्ना ११:२५ अनुसार यहोवाले येशूलाई के गर्ने शक्ति दिनुभएको छ?
१६ येशूको पुनर्जीवनले उहाँले सिकाउनुभएको सबै कुरा सही हो भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। येशू पुनर्जीवित नभएको भए ख्रीष्टियनहरूको विश्वास र प्रचारकार्य बेकार हुने थियो भनेर पावलले लेखे। एक बाइबलविद्ले यस्तो लेखे, “ख्रीष्ट पुनर्जीवित भएको होइन भने . . . ख्रीष्टियनहरू सबै मूर्ख हुन्‌ र उनीहरूले झूटो कुरा पत्याइरहेका हुन्छन्‌।” येशू पुनर्जीवित नभएको भए सुसमाचारको विवरण शत्रुहरूले मारेको एउटा असल र बुद्धिमान्‌ मानिसको कथा मात्रै हुने थियो। तर येशू मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो। यसले भविष्यबारे उहाँले बताउनुभएका कुरालगायत सबै कुरा सही हो भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ।—१ कोरिन्थी १५:१४, १५, २० पढ्नुहोस्।
१७ येशूले यसो भन्नुभयो, “पुनर्जीवन र जीवन मै हुँ। जसले ममाथि विश्वास गर्छ, ऊ मऱ्यो भने पनि फेरि जीवित हुनेछ।” (यूह. ११:२५) येशूले भन्नुभएको यो कुरा पूरा हुनेछ। यहोवाले मरेकाहरूलाई जीवित पार्ने शक्ति येशूलाई दिनुभएको छ। उहाँले स्वर्गमा जीवन पाउनेहरूलाई र पृथ्वीमै सधैंभरि बाँच्ने आशा भएका अरबौं मानिसलाई पुनर्जीवित पार्न सक्नुहुन्छ। येशूको बलिदान र पुनर्जीवनले मृत्यु नामेट हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। त्यसैले हामी परीक्षा सहन र परेको खण्डमा ज्यान दिनसमेत पछि हट्दैनौं।
१८. येशूको पुनर्जीवनले कुन कुराको ग्यारेन्टी दिन्छ?
१८ येशूको पुनर्जीवनले मानिसहरूको न्याय मायालु परमेश्वरको स्तरअनुरूप हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी दिन्छ। पुरातन एथेन्समा एउटा समूहलाई सम्बोधन गर्दै पावलले यसो भने, “आफूले निर्धारण गरेको स्तरबमोजिम सारा संसारको न्याय गर्न . . . आफूले नियुक्त गरेको एक जना मानिसद्वारा [परमेश्वरले] त्यो दिन न्याय गर्नुहुनेछ। अनि त्यस मानिसलाई मृत्युबाट ब्यूँताएर परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई यसको ग्यारेन्टी दिनुभएको छ।” (प्रेषि. १७:३१) हो, येशू स्वयम् यहोवाले नियुक्त गर्नुभएको न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले ठीकसित न्याय गर्नुहुनेछ।—यशैया ११:२-४ पढ्नुहोस्।
१९. येशूको पुनर्जीवनमा विश्वास गरेकोले हामीलाई कस्तो फाइदा भएको छ?
१९ येशूको पुनर्जीवनमा विश्वास गर्दा यहोवाको इच्छा गर्न जुरमुरिन्छौं। येशूले आफ्नो जीवन बलिदानको रूपमा नदिएको भए र उहाँ पुनर्जीवित नभएको भए हामी पाप र मृत्युबाट मुक्त हुने थिएनौं। (रोमी ५:१२; ६:२३) उहाँ पुनर्जीवित नभएको भए हामीले पनि यसो भन्थ्यौं होला, “आओ, हामी खाऔं र पिऔं, किनकि भोलि त हामी मरिहाल्छौं पो।” (१ कोरि. १५:३२) हामी सुखसुविधाको पछि लाग्दैनौं। बरु पुनर्जीवनको आशालाई मनमा राख्छौं र सधैं यहोवाको आज्ञा पालन गर्छौं।
२०. येशूको पुनर्जीवनले यहोवाको महानताको प्रमाण कसरी दिन्छ?
२० यहोवा ‘जोडतोडले उहाँको खोजी गरिरहनेहरूलाई इनाम दिने’ महान्‌ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण येशूको पुनर्जीवनले दिन्छ। (हिब्रू ११:६) येशूलाई स्वर्गमा अमर जीवन दिन यहोवाले आफ्नो शक्ति र बुद्धि प्रयोग गर्नुभयो। प्रतिज्ञा पूरा गर्ने क्षमता आफूसित छ भन्ने कुरा पनि उहाँले देखाउनुभयो। आफ्नो शासन गर्ने अधिकारमाथि उठाइएको विवाद एउटा विशेष “सन्तान”-ले सुल्झाउनेछ भनेर यहोवाले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। त्यो प्रतिज्ञा पूरा हुन येशू मर्नुपर्थ्यो र फेरि जीवित हुनुपर्थ्यो।—उत्प. ३:१५.
२१. पुनर्जीवनको आशा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
२१ यहोवाले पुनर्जीवनको आशा दिनुभएकोमा के तपाईं उहाँप्रति आभारी हुनुहुन्न र? बाइबलमा यस्तो प्रतिज्ञा गरिएको छ, “हेर, परमेश्वरको बासस्थान मानिसहरूसित भएको छ र उहाँ तिनीहरूसित बस्नुहुनेछ अनि तिनीहरू उहाँका जनहरू हुनेछन्‌। परमेश्वर आफै तिनीहरूसित रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ अनि मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि कहिल्यै शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ। पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्‌। . . . लेख, किनकि यी वचनहरू विश्वासयोग्य र सत्य छन्‌।” यो कुरा प्रेषित यूहन्नालाई कसले लेख्न लगायो? पुनर्जीवित हुनुभएका येशू ख्रीष्टले।—प्रका. १:१; २१:३-५.